CENI: Soson-kevitra telo ihany no vahaolana | Madatopinfo
CENI: Soson-kevitra telo ihany no vahaolana
Manoloana izao toe-draharaham-pirenena misafotofoto izao, ahiana ny mety tsy hahatontosa ny fifidianana noho ny fandaniam-potoana amin’ny ady jevitra ara-politika. Noho izany indrindra no nandraisan’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI tolo-kevitra hentitra. Telo ihany ireo soson-kevitra ho vahaolana amahana izao olana ara-politika izao, na io firosoana amin’ny fifidianana mialoha ny fotoana, na fanarahana izay voarakitry ny Lalam-panorenana, na ihany koa fanemorana ny fifidianana ho amin’ny taona 2019.
“Araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-52 amin’ny Lalam-panorenana, dia azo atao ny manatontosa ny fifidianana Filoham-pirenena mialoha ny fotoana”, hoy ny Filohan’ny CENI Hery Rakotomanana omaly teny Nanisana.
Tetiandro telo noho izany no natolotr’ity Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana ity ka arakaraky ny marimaritra iraisan’ny rehetra no hanatontosana izany. Amin’ny 29 Aogositra 2018 no fotoana akaiky indrindra naroson’ny CENI, ny daty faharoa kosa ny Alarobia 28 Novambra 2018 ary ny tetiandro fahatelo ny 29 May 2019. Ireo tranga telo ireo no mety hanatanterahina ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany. Eo anatrehan’izany, mitaky ny Lalàm-pifidianana sy fandaminana ara-politika reherra amin’ity volana ity ny CENI. Mba hotanteraka antsakany sy andavany anefa izany, dia miantso ny herivelona rehetra rsy ankanavaka ny CENI, ireo antoko politika, fiarahamonim-pirenena, ireo Ray aman-dreny ara-panahy, ny mpanao gazety ny Zoma ho avy izao etsy Antaninarenina.